क्वालालम्पुरमा दसैँको शुभकामना आदनप्रदान | Hamro Okhaldhunga
क्वालालम्पुरमा दसैँको शुभकामना आदनप्रदान
प्रकाशित मिति: ०९ असोज, २०७४
ओखलढुंगा । ‌ओखलढुंगा एकता सेवा समाज मलेसियाले आइतबार दशैँ तथा दीपावलीको शुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मलेसियास्थित क्वालालम्पुर ५ इलामेन्ट होटलमा आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्था प्रतिनिधि साथै स्थानीय कलाकारको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमको सभापतित्व संस्थाका अध्यक्ष हिरा बहादुर थापाले गरेका थिए । प्रमुख अतिथि इलामेलि जनसम्पर्क मंच मलेसियाका निबर्तमन अध्यक्ष तथा हाल प्रमुख सल्लाहकार नरेन्द्र कार्की थिए । यस्तै ताप्लेजुङ सम्पर्क समिती मलेसियाका अध्यक्ष भुपेन्द्र लिम्बू तथा दोल्खा युवा समाज मलेसियाका महासचिव त्यसै गरि नेपाल मगर संघ मलेसियाका सङगठन बिभाग प्रमुख चुर्ण बहादुर मगर तथा नेचाली एकता समाज मलेसियाका कोषध्यक्ष कुसाङ राई सुनुवार सेवा समाज मलेसियाका प्रतिनिधि प्रेम सुनुवार अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए ।
शुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रममा प्रवासमा समन्वय गरेर चल्नु पर्ने भनी सम्पुर्ण संघ सस्थालाइ एकजुट भएर अगाडि बढनु पर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य सस्थाका प्रमुख सल्लाहकार मोहन घिमिरेले गरेका थिए भने सस्थाको परिचय काम र सस्थाले गरेको उपलब्धि संरक्षक शिव कुमार घिमिरेले राखेका थिए ।
संस्थाका कोषध्यक्ष रिद्दी अधिकारीले कार्यक्रममा उपस्थिति हुने सबैलाई धन्यवाद दिए । कार्यक्रम संचालन सहसचीव तथा नव गायक बिष्णु रिजालले हुन् । कलाकारहरु कोपिला मगर, अमिर अधिकारी, सान्ती कार्की, राजेस सुब्बा, अमु सेर्पा लगायतका कलाकारहरुले कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।
कार्यक्रममा संस्थामा महत्वपूर्ण भुमिका निभाएर सहयोग गर्ने प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख नवराज खत्रीलाई विदाइ गरिएको थियो । खत्रीले सस्था प्रती देखाएको योगदानको कदर गर्दै सस्थाले संरक्षक सिब कुमार घिमिरे तथा अध्यक्ष हिरा बहादुर थापाको हस्ताक्षर भएको कदर पत्र प्रमुख अतिथी नरेन्द्र कार्कीको हातबाट हस्तान्तरण गरिएको थियो । उनलाई संरक्षक शिव कुमार घिमिरे, अध्यक्ष हिराबहादुर, प्रमुख सल्लाहकार मोहन घिमिरे, कोषध्यक्ष रिद्दी अधिकारी लगायतले खादा ओढाइ उज्ज्वल भविस्यको कामना गर्दै बिदाइ गरेका थिए ।
दिपक दाहालका दुई कविता
भलिबल प्रतियोगितामा खसी पुरस्कार !
नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अधिकृत शिवजी श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तक बेलायतबाट प्रकाशन
०३ बैशाख, २०७५
२० चैत, २०७४
१६ माघ, २०७४
जिताउने होइन त ‘जोर मादल जुइना’ का गायकलाई ?
२८ पुष, २०७४